Danjire xusen cali ducale, Araga Siyaad bare waxa Iigu Horaysay, Sheekadan ayana na dhex martay,
Kulammo fara badan ayaan la yeeshay Maxamed Siyaad Barre markii aan Danjiraha ahaa iyo intii ka horraysayba. Waxa araggiisa iigu horraysay 4tii Sebtembar 1961kii. Waxa aannu ahayn aniga, Xasan Cabdulle Walanwal “Xasan-Kayd” iyo Cabdillaahi Siciid Caabbi. Waxa aannu ka nimid Hargeysa si aannu ula kulanno Taliyaha Milatariga Jenaraal Daa’uud Cabdalle Xirsi.
Jenaraal Daa’uud ayaannu 8dii subaxnimo u galnay. Si fiican nooma uu qaabbilin, annaguna hadal uma aannu reeban. Waxa aannu u sheegnay in Koonfuri ay wax walba qaadatay, ragna aanay talo ka dhammaan, sidaas darteed aannu arrintayada meel uun saari doonno. Waxa uu noogu jawaabay: “waan ka warqabaa in Ingiriiskii saraakiil kaga tagay Waqooyiga, waxa aan rabaa in aynnu marka hore is baranno.”
Markii aannu ka soo baxnay xafiiskii Jenaraal Daa’uud, waxa aannu aragnay xafiiska ku xiga oo ay ku qoran tahay “capo dell sato maggiore” oo aannu is nidhi waa “Chief of Staff” ama abbaanduulaha ciidanka oo isla markaasna ahaa taliye-kuxigeenka ciidanka. Waxa aannu isku qabannay aynnu galno iyo innaga daaya u gali maynno e, marba haddii aynnu aragnay dareenkii Taliyaha guud, madax meel ka sarreeya oo la salaaxaa ma jirto e. Laakiin waxa aannu u badannay in aannu u galno.
Markii aannu galnay waxa ishaydu qabatay nin fadhiya xafiis haawanaya oo aanu xataa miiska dushiisa hal fayl dul oollin. Waxa dul yaalla oo kali ah haashtari uu sigaar ka buuxo iyo koob yar oo bun ka dhammaaday. Fadhi ma lahayn, waxa yaallay oo kali ah saddex kursi oo dhaadheer oo aannu ku fadhiisannay. Aad ayay iiga yaabisay sida xafiiskiisu ahaa, waayo abbaanduuluhu waxa uu ahaa sarkaalka ugu shaqada badan.
Ninka xafiiska fadhiyaa waa Maxamed Siyaad Barre oo aannu maalintaas is barannay, waana maalintii araggiisa iigu horraysay. Waxa aanan illaawi karin sidii diirranayd ee uu noo qaabbilay.
Markii aannu isku sheegnay in aannu nahay saraakiishii Waqooyiga ayaa inta uu kursigii ka soo booday uu noo soo wareegay oo qof qof noo salaamay. Wuu na fadhiisiyay, markaas ayuu judhiiba bun “Cappuccino” ah noo dalbay. Hadalkiisa waxa uu ku bilaabay “waa dadkii sharafta lahaa, waa dadkii gobta ahaa, waa dadkii israaca keenay.”
Intii aannu Jenaraal Daa’uud ku nidhi ayaannu isagana ku nidhi: in dawladnimadii ay Koonfuri wada qaadatay oo aan waxba na loo reebin, ragna aanay talo ka dhammaan. Waxa uu noogu jawaabay:
“Dawladnimadiinnii idinka ayaa halkan keenay, sidaas ayaanay ku galbatay. Cid idin soo khasabtay ma jirto. Ma idinla taliyaa? Soomaalidu waxa ay geesiga u yaqaannaan qofka qof kale xabbad wadnaha kaga dhufta. Laakiin kaasi waa fuley. Geesiga dhabta ahi waa qofka marka la ciilayo adkaysan kara. Aniga ba derajadii aan xaqa u lahaa waa ta halkan lagala sii jeedo (waxa uu farta ku fiiqay xafiiska Jenaraal Daa’uud). Waxa aan ku adkaysanayaa geesinnimo igu jirta. Haddii aan hadlo wax ay ii taraysaa ma jirto. Waa la iiga sii darayaa. Aniga oo konton iyo dheeraad jira ayaa adkaysanaya. Idinkuna labaatan jirro ayaad tihiin oo konton sanno oo dambe ayaad noolaan kartaan. Waxa idin soo mari doonta maalin aad cabashadaas wax ka qabataan. Dayuuradda Cali Mataan ee berri Hargeysa u duulaysa raaca. Aamusa oo afkiinna haysta. Adkaysta. Shaqadiinna si fiican u qabsada hana ka hordhicina maalintiinna.”
Markii aannu ka soo baxnay ayaannu dib u jalleecnay xafiiskiisii, iyada oo qofna aanu qof la hadal annaga oo niyadda iska leh “waar muxuu ahaa qofkan aadka uga duwan saraakiisha kale!”
Intii aannu xafiiskiisa ku jirnay oo laba saacadood ku dhoweyd cid xafiiskiisa soo gashay ma jirin. Waxa aannu dareennay oo noo muuqatay in uu ahaa nin go’doon ah oo aan cidi wax weyddiin, dagaalna ku socdo.
Xigasho: ‘Raadraaca Taariikh Soomaaliyeed’ – Danjire Xuseen Cali Ducaale “Cawil”.